Bogga ugu weyn Immisa Ayaa La Siiyaa Astronauts 2022?
Markii qaar naga mid ah ay yaraayeen, waxaan ku riyoonnay inaan aadno hawada sare annaga oo aragna dhulka iyo meerayaasha ku jira nidaamka qorraxda. riyooyinkaas waxaa badanaa dhiirigeliyay kartoonnada, filimada, iyo buugaagta majaajilada ah ee aan akhrinay markaan kornay.
Ugu dambeyntii, qaar ayaa sita riyo caruurnimo iyaga oo wata ilaa ay ka koraan ka dibna ay noqdaan sahamiyeyaal hawada sare ama cirbixiyeen.
Laakiin intaanan sii socon, waa ayo cirbixiyeenada, maxayse qabtaan cirbixiyayaashu?
Waa kuma cirbixiyeenka?
Waa maxay Mas'uuliyadaha Cirbixiyeenka? Maxay qabtaan cirbixiyeenadu?
Immisa Ay Sameeyaan Astronauts?
Nasa sanadka 2016: Mushaharka cirbixiyeenada rayidka ah
Nasa sanadka 2017: Mushaharka cirbixiyeenada rayidka ah
NASA ee 2018: darajooyinka GS-11
Sidee Loo Noqdaa Astronaut? Aqoonta Tababarka iyo Waxbarashada
Ma tahay inaad noqoto cirbixiyeen?
Waa maxay noocyada Astronauts?
Waa maxay xirfadaha ay tahay in cirbixiyayaashu ay u qalmaan?
Maamulka Hawada Sare iyo Hawada Qaranka (NASA) waxa ay cirbixiyeennada ugu yeeraa "dhammaan kuwa loo diray in ay xubno ka yihiin markabka NASA [ama hay'ad kasta oo kale oo hawada sare ah] oo ku xiran orbit iyo wixii ka baxsan".
Shabakadda rasmiga ah ee NASA ayaa sii sharraxaysa in ereyga “astronaut” uu ka yimid ereyada Giriigga ee 'astronaut' iyo 'nautes' oo marka la turjumayo macneheedu yahay "badmaaxayaasha hawada sare".
Inaad noqoto cirbixiyeen waa hab aad u adag oo aan loogu talagalin qof walba sababtoo ah xitaa qurxinta jirkaaga iyo hidde-socodka ayaa saameeya fursadahaaga. Habka xulashada keligiis waxa uu ku sifeeyay hal qof oo doonaya in uu yahay "ka baxay aduunkan".
Xirfadda cirbixiyeenku waa mid sharaf leh sababtoo ah waxay naftooda u biimeeyaan si ay wax badan uga bartaan caalamka oo ay u badbaadiyaan aadamiga aqoonta ay barteen ee cilmiga xiddigiska.
Waa kooras sharaf leh oo la raaco waana mid mudan hal-abuur cusub.
Sharaxaada shaqada ee cirbixiyeenka sidoo kale loo yaqaan badmaaxiyaha hawada sare waa kala duwan yahay. Cirbixiyayaashu waxay wakhtigooda ku qaataan inta badan qolalka maraakiibta hawada sare, iyagoo samaynaya tijaabooyin cilmiyaysan, iyagoo siinaya jawaab celin wakhti ku haboon shaqaalaha tababaran ee dhulka, iyo soo ururinta muunado ku saabsan jidhka cosmic ee ay ku yimaadaan.
Waxay abuuraan mala-awaal waxayna sameeyaan tijaabooyin si ay u tijaabiyaan iyagoo la socda mashaariicda kale ee socda marka ay wataan hawl maalmeedkooda. Maadaama cirbixiyeenadu u safraan sidii shaqaale ahaan, cirbixiyeen kastaa wuxuu leeyahay doorkiisa saxda ah ee uu ku ciyaaro inta uu ku jiro howlgalka hawada sare.
Markaa, ma tilmaami kartid shaqada saxda ah ee dhammaan cirbixiyeennada aad aragto haddii aan laguu sheegin. Shaqaaluhu waxay u duulaan meelo kala duwan, mararka qaarkoodna hawlgallada ayaa isbeddela iyadoo natiijadu ay noqoto mid isbeddelaysa doorka cirbixiyeen kasta oo ku jira dayax-gacmeedka.
Akhri: Immisa Ayaa La Siiyaa Kursiga Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Ku Saabsan Ku-noqoshada
Astronauts maaha ciyaaraha fudud or dadka caanka ah ee madadaalada kuwaas oo ay mudan yihiin inay noqdaan. Ma helaan malaayiin dollar howlgal kasta oo ay dhameeyaan si la mid ah jilaayaasha filimada sameeyaan ka dib marka ay jilaan filim blockbuster ah.
Hase yeeshe, cirbixiyeenadu waa dad cilmi ah oo adeegsigoodu yahay faa'iidada aadanaha.
Si kastaba ha ahaatee, NASA iyo qaar ka mid ah khubarada ayaa ku waramaya in kororka soo noqnoqda ee Elon Musk's Space X iyo Jeff Bezos 'Blue Origin ay tuurayaan gantaalada ay kordhin doonto baahida cirbixiyeennada iyo shaqaalaha sayniska hawada sare. Baahida shaqada & suuqa saadka ee mihnaddan ayaan weli gaarin meeshii ugu sarreysay.
NASA waxa ay sheegtay in cirbixiyeenka ka mid ah dadka wax qabad ee heerkiisa sare ka gaaray uu heli karo mushaar ka badan $100,000 sanadkii. Tirada saxda ah waxay kuxirantahay heerka u qalmida akadeemiyada iyo farsamada ee cirbixiyuhu gaadho.
Mushaharka sanadlaha ah ee cirbixiyeenada waxaa loo kala saaraa heerka mushaharka rasmiga ah ee fasalada GS-12 iyo GS-13.
Mushaarku wuxuu kaloo ku xiran yahay miisaaniyadda Dowladda Federaalka ee socdaalka hawada sanadkaas. Haddii kan dambe uu sarreeyo, markaas cirbixiyeenadu waxay helayaan mushahar sare iyo ku-xigeenka.
Xafiiska Maareynta Shaqaalaha ee Mareykanka ayaa la og yahay inuu mas'uul ka yahay mushaharka aasaasiga ah iyo nidaaminta tirooyinka sannad kasta. Paycheck.in wuxuu iftiimiyay heerarka mushaharka ee cirbixiyayaashu sameeyaan.
Musharrixiinta waxay ku saleysan yihiin Jadwalka Guud ee Dowladda Federaalka ee cabbirka mushaarka ee fasallada GS-11 illaa GS-14.
Darajada waxaa lagu go'aamiyaa si waafaqsan guulaha waxbarasho iyo waayo-aragnimada qof walba.
Hadda, GS-11 wuxuu ka bilaabmaa $66,026 sanadkii, GS-14-na wuxuu kasban karaa ilaa $144,566 sanadkii.
Musharrixiinta waxay ku saleysan yihiin Jadwalka Guud ee Dowladda Federaalka Miisaanka Mushaharka ee fasalada GS-12 ilaa GS-13.
XIDHIIDHKA: Maxaa Laga Sameeyay Suuqa Isbarbar Socda Ee Nigeria | Tilmaan Buuxo
Qofkasta darajadiisa waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo guulihiisa waxbarasho iyo khibradiisa.
Hadda, GS-12 wuxuu ka bilaabmaa $65,140 sanadkii, GS-13-na wuxuu kasban karaa ilaa $100,701 sanadkii.
Jadwalka Guud ee Dowladda Mareykanka Miisaanka Mushahar bixinta ee darajooyinka GS-11 waxaa lagu qiyaasaa $98,317 sanadkii halka fasalka GS-14 cirbixiyeenada ay helaan $63,600 sanadkii.
Cirbixiyeenada u qalma ee haysta darajada mushaharka ee GS-13 waxay bilaabi karaan inay helaan $75,628 sanadkii (Tallaabada 1) iyo, sanadaha qaar oo adeeg ah kadib, ilaa $98,317 sanadkii (Tallaabo 3).
Tis wuxuu horey u sharaxay inta ay le'eg tahay Astronauts-ka ee la bixiyo wakhti hore.
Waalid koriyey ahaan, Immisa Ayaa La Siiyaa Waalidiinta Korinaya?
Si aad u noqoto cirbixiyeen, waa in marka hore la galaa xarunta tababarka cirbixiyeenada. Laakiin marka hore, waa inaad buuxisaa shuruudaha aasaasiga ah ee soo socda:
Waa inaad tahay muwaadin Maraykan ah
Waa inaad lahaataa ugu yaraan laba sano oo waayo-aragnimo ah xagga Xisaabta, Fiisigiska, Astronomy, Metrology, ama khibradaha kale ee la xidhiidha ee ku xidhan noqoshada cirbixiyeen. Haddaysan ahayn, waa inaad haysataa ugu yaraan 1,000 saacadood oo waayo-aragnimo tijaabo ah diyaarad kasta oo dadweyne ama mid gaar ah.
Waa in uu ku dhammaystay shahaadada mastarka ee maadada STEM oo ay ku jirto bayoolaji, fiisigiska, xisaabta, injineernimada, ama sayniska kombiyuutarka ee machad sumcad leh.
Waa inaad awood u leedahay inaad ka gudubto jilitaanka duulimaadka cirbixiyeenada muddada dheer ee NASA.
Shuruuda u dambaysa inta badan waa tillaabada xaddidaadda sicirka sababtoo ah waa meesha 98% codsadayaasha laga saaro.
NASA (ama Space X's) Guddiga Xulashada Astronaut waxay dib u eegaan tobanaan kun oo codsiyo hal mar dhowrkii sano ee la soo dhaafay ka hor inta aysan dooran 1% ee ugu sarreeya.
Intii lagu jiray barnaamijka xulashada 2016/17, kaliya 12 codsade ayaa laga soo saaray 18,300 codsade markaas taas oo ka dhigaysa codsiga shaqo ee ugu adag in lagu gudbo adduunka.
Dabcan, go'aaminta inaad rabto inaad noqoto cirbixiyeen ama haddii kale waxay ku jiiftaa garabkaaga. Su'aashaasi dhab ahaantii waxay ku xidhan tahay adiga iyo doorashadaada shaqo. Caqabada gelitaanka ee noqoshada cirbixiyeentu maaha wax kaftan ah halka shuruudaha shaqada ee cirbixiyeenka aqoonta leh ay aad uga fog yihiin kuwa fudud.
Cirbixiyeenada qaar ayaa hawada ku jira dhawr bilood ka hor intaysan iman dhulka oo ay la kulmin kuwa ay jecel yihiin. Markaa heerka ballanqaadka shaqada waa mid aad u xiiso badan.
XIDHIIDHKA: 17ka Shirkadood ee ugu Sareeya Shidaalka Nigeria 2022 | Rigs, Dakhliga iyo Networth
Si kastaba ha ahaatee, xiisaha iyo aqoonta ay cirbixiyeenadu ka helaan sahaminta maydadka samada iyo meerayaasha waa mid aan la soo koobi karin. Intaa waxaa dheer, mushaharka mushaharku wuu fiican yahay oo aqoonsiga caalamiga ah waa mid weyn.
Qaybta ugu adag ee noqoshada cirbixiyeen u qalma waa tababarka adag ee aan loogu talagalin qof kasta.
Tani waa sababta oo ah ma jiro qof qaba dhibaatooyin caafimaad oo fursad u leh in la doorto xitaa ka mid ah codsadayaasha caafimaadka qaba, 9/10 kama gudbi doono xoogga, dulqaadka, iyo baaritaanka la qabsiga ee soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad wax ka barato qaybaha kale ee koonka iyo waxa ku jira iyo rabitaanka inaad ku riixdo aragtida aadanaha si ay u noqdaan kuwo isku xiran, markaa noqoshada cirbixiyeentu waxay noqon kartaa shaqo fiican adiga.
Snce waxaan horey u ogaanay inta ay le'eg tahay cirbixiyeenada la siiyo, tani waa inay kugu dhiirigelisaa inaad mid noqoto.
Waxaad akhrin kartaa: Intee in le'eg ayaad ku bixisaa si aad ugu deeqdo shahwo: 10 meelood oo ugu wanaagsan sannadka 2021
Noqoshada cirbixiyeentu waa mid ka mid ah xirfadaha adag ee loogu qalmo laguna dhaqmo. Sidoo kale waa shaqo aad loogu baahan yahay maadaama gaar ka dhigista warshadaha hawada sare ay kordhisay baahida cirbixiyeeno badan hadda iyo tobanaan sano ee soo socda.
Qodobkan, waxa la odhan karaa mushaharku wuu liitaa marka loo eego heerka sare ee shuruudaha shaqada. Waxaa laga yaabaa in celceliska mushaharka cirbixiyayaashu ay korodho mustaqbalka laakiin barta xudunta u ah noqoshada cirbixiyeenada ayaa weli ah xiisaha ay u sahamiyaan caalamka oo ay badbaadiyaan adduunka.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan inta ay le'eg tahay cirbixiyeenada? Hoos noogu dhaaf faallo.
Waxaa jira cirbixiyeeno rayid ah iyo cirbixiyeen ciidan oo mid walbaa wata qaab musharkiisa.
Cirbixiyayaashu waa inay lahaadaan xirfado badan oo adag oo jilicsan oo ay ku jiraan garaad heer sare ah, dulqaad maskaxeed, laqabsi, iyo xoog jireed.
Waa Kuma Ciyaartoyga Ugu Mushaarka Badan Ee NFL-ka Adduunka?
Sida Loo Si Fudud Lacag Loogu Bixiyo Nooca
20ka Goobood ee ugu Fiican NFL ee Daawashada Kubadda Tooska ah
Ma aaminsan tahay in si aad u hesho maciishada macquulka ah, ay tahay inaad shaqeyso in ka badan 40 saacadood…